ညိမ်းညို: May 2008
Posted by ညိမ်းညို at 02:11 20 comments Links to this post
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကို ဆွေးမယ်
နွေးထွေးခဲ့ဖူးတဲ့ ရာသီတစ်ချို့ ကို လွမ်းမယ်
ရန်ကြွေးတွေကို ခ၀ါခ်ျိစွန့်လွှတ်ရင်း အသာတကြည် ပြုံးမယ်
စက္ကူအပိုင်းအစလေးတစ်ခုကို စိတ်လိုလက်ရ မျှော်မယ်
သာသာဖွဖွခြေလှမ်းနဲ့ တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်ခဲ့မယ်
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ထိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ...။
Posted by ညိမ်းညို at 23:40 10 comments Links to this post
Posted by ညိမ်းညို at 16:47 10 comments Links to this post
ငါအသက်ရှင်နေသရွေ့ကိုဖတ်အပြီးမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကိုရန်အောင်ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ အဲသည်အခါတုန်းက အသီးသီးတင်ခဲ့ကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပို့စ်များစွာအနက် ကိုရန်အောင်ရဲ့ ငါအ သက်ရှင်နေသရွေ့ ကဗျာရှည်ဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို အလွှမ်းမိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါ ကိုရန်အောင်ရဲ့ ပရမတ်ဆိုတဲ့ကဗျာကို ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြပါရစေ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ခင်မင်ရင်းနှီးနေမိတဲ့၊ ဘလော့လက်ဦး မြင်ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ကိုရန်အောင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ညီအကိုမောင်နှမများ၊ သူငယ်ချင်းများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။ ဘေးအပေါင်း၊ ရန်အပေါင်းမှ လွတ်ကင်းကြပါစေ။
ရေးကြ တွေးကြ ဆဲကြ ဆိုကြ
အရည်မရ အဖတ်မရ ငြင်းခုန်ကြ
ဟိုမှာတော့ အစာပြတ်နေကြ၊ ရေငတ်နေကြ…
အပြစ်မဲ့ လူသားတစ်ယောက် သေဆုံးလွင့်ပျောက်သွားနိုင်တယ်
ကလေးငယ်တစ်ယောက် ရေထဲမှာ ကယ်သူမဲ့ မျောပါသွားနေနိုင်တယ်
လာကယ်မယ့် စက်လှေကို စောင့်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး သစ်ပင်ထက်က လိမ့်ကျသွားနိုင်တယ်.
ငါတို့ ရွှေမြန်မာပြည် အညွန့်ကျိုးနေရပြီ…
ငါလည်း ငါလုပ်နိုင်တာ ငါလုပ်မယ်.
သူလည်း သူလုပ်နိုင်တာ သူလုပ်ပါစေ.
လူရဲ့တန်ဖိုးကို ပညတ်တွေနဲ့ မတိုင်းတာနဲ့
ရင်ဘတ်ထဲက ပရမတ်ကို မြင်အောင်ကြည့်
စစ်ဗိုလ်ဆိုတိုင်း လူဆိုးလို့ မသတ်မှတ်နိုင်သလို
ဒီမိုသမားဆိုတိုင်းလည်း အထင်ကြီးလို့ မရဘူး
အခွင့်အရေးသမားဟာ အခွင့်အရေးကိုပဲ မျှော်တယ်
တကယ်လုပ်သူဟာ လုပ်စရာရှိတာကိုပဲ လုပ်တယ်.
လည်စင်းခံရမယ့် ရက်ကို အတူတူချီတက်သွားကြ…
မင်းနဲ့ငါ လမ်းကြောင်းမတူပေမယ့် ဦးတည်ချက်တူတယ်
နှလုံးသားထဲက မနာလိုမှုတွေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကို
မင်းလုပ်တာကို သမိုင်းက မော်ကွန်းထိုးမယ်
မင်းကိုယ်တိုင်တော့ ၀င်ရေးဖို့ မကြိုးစားနဲ့
ဒေါသထွက်နေရုံ၊ ခံပြင်းနေရုံ၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေရုံ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး... မှောင်လှချည်လားလို့ ငြီးတွားအပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ထဲက ဖယောင်းတိုင်လေး တစ်တိုင်စီလောက်ကို ထွန်းညှိလိုက်ကြရအောင်....
မုန်တိုင်းဘေးကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကူညီကြပါ..
Posted by ညိမ်းညို at 21:023comments Links to this post
ဗဟုကဗျာရေစီး နှင့် မော်ဒန်ဝဲ
အဓိပ္ပါယ်က မြန်မာတွေရေးတဲ့ကဗျာအကြောင်းပေါ့။ အဲဒါကိုပဲ နည်းနည်းတိကျအောင် ထပ်ပြောရရင် ဒီနေ့ ခေတ် မြန်မာကဗျာအကြောင်း ဆိုပါတော့။ (သမိုင်းနဲ့ချီပြီးပြောရအောင် မရည်ရွယ်ပါဘူး။)
အဲသလို ပြောမယ်ဆိုတော့ "ကဗျာဆိုတာ ဘာလဲ" လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ဖို့ စတင်လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ကျယ်ဝန်းလွန်းလှတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကဗျာဆိုတာ အချိန်တိုင်းမှာ နေရာတိုင်းမှာ အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိနေတတ်တဲ့အရာလို့ ကျွန်တော်က လက်ခံထားလို့ပဲ။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ဒီလောက်ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဟုတ်ဘဲ ကဗျာဆိုတာ စာနဲ့ရေးသားတင်ပြထားတဲ့(ဒါမှမဟုတ်) စကားလုံးတွေကို ကြားခံပစ္စည်း အဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ (ကဗျာ) တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ကွက်ပြီးဆိုလိုတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ ခဏသ ဘောတူထားလိုက်ကြရအောင်။ (နောက်ဆုံးရွတ်တဲ့ကဗျာအတွက်တောင် မရည်ရွယ်ဘူးဆိုပါတော့။)
ဒီမေးခွန်းကိုဖြေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အဖြေက ခြွင်းချက်မဲ့ပြီး ပြည့်စုံတဲ့အဖြေ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင်အသိပေးထားလိုပါတယ်။ ကဗျာကို ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ရှုထောင့်နဲ့ကိုယ် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနေကြ တဲ့အထဲက သမုတိသဘောတစ်ခုလို့သာ သဘောထားကြစေချင်ပါတယ်။
(ကဗျာမဆန် ဆန်အောင် ဇွတ်လုပ်နေကြတယ်။)
၂။ ဝေါဟာရ ဖက်ရှင်ရှိုး မဟုတ်ဘူး။
(အနှစ်မပါဘဲ အဆံချောင်နေတာ တွေ့ရတယ်။)
၄။ ကြည်လင်ရမယ်၊ သန့်စင်ရမယ်။
(ဖန်တီးမှုမဟုတ်ဘဲ ၀ိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေတယ်။)
(ဟန်ဆောင်တာတွေ၊ ဟန်လုပ်တာတွေ များနေတယ်။)
၁၀။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိရမယ်၊ ဆန်ရဲရမယ်။
(နာမည်ကြီးတဲ့လူနောက်၊ ရေစီးကြောင်းနောက် လျှောက်လိုက်နေကြတယ်။)
၁၁။ အပြည့်အ၀ လွတ်လပ်မှုရှိရမယ်။
(ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေကြေးမျှောင်လင့်ချက်ထားသူအင်မတန်နည်းပေမဲ့ ကဗျာရေးသူ အတော်များများဟာ နာမည်ကြီးချင်မှု၊ အများကြိုက်ခံချင်မှု စတဲ့ အနှောင်အတည်းတွေနဲ့ ရည်ရည်ရွယ်ရွယ်ပဲ ငြိနေတတ်ကြတယ်။)
၁၂။ အထက်တန်းကျတဲ့ အလှတရားနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်။
၁၃။ ကာလနဲ့ ဒေသသဘောက ကင်းလွတ်နေရမယ်။
ဒါတွေက လတ်တလောစိတ်ထဲရှိတာလောက် ပြောလိုက်တဲ့ ကဗျာရဲ့ ယေဘုယျလက္ခဏာ(ဒါမှမဟုတ်) ကဗျာ ဂုဏ်ရည်တချို့ပေါ့။ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဲဒီအရာကို ကဗျာလို့ လက် ခံဖို့ ၀န်မလေးတော့ဘူး။
ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့ ယာယီသဘောတူညီမှုရရင် မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာကဗျာအခြေအနေကို သုံးသပ်ကြည့် ရအောင်။
(က) ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့ခင်းခဲ့တဲ့ ခေတ်စမ်းကဗျာလမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ က ဗျာများ။ အခုခေတ်မှာတော့ ခေတ်စမ်းသစ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ မြ၀တီ၊ ငွေတာရီ အစရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ပါ တတ်တဲ့ ကဗျာအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) နောက်အမျိုးအစားကတော့ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တစ်ဝိုက် လူငယ်ကဗျာဆရာတွေ စုစည်းကြိုးပမ်းထူထောင်ခဲ့ ကြတဲ့ မော်ဒန်ကဗျာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ (မော်ဒန်ကဗျာဝါဒ သဘောတရားကို သီးခြားလေ့လာကြစေလို ပါတယ်။)
မျက်မှောက်ခေတ်မြန်မာကဗျာကို လေ့လာလိုက်ရင် အဲသလို သိသာ ထင်သာတဲ့ ကဗျာအမျိုးအစားတွေ ထွေးရောယှက်တင် သူ့နေရာနဲ့သူ ရေးဖွဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒိနေ့ ကဗျာရေစီးဟာ ဗဟုကဗျာရေစီး လို့ ပြောရရင် လွဲနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ အဲဒီရေစီးထဲမှာ အထင်ရှားဆုံး အင်အားအကောင်းဆုံး တွေ့မြင်ရတာက တော့ မော်ဒန်ကဗျာဆိုတဲ့ ၀ဲကတော့ကြီးပါပဲ။ (ရှေးရိုးအစဉ် မြန်မာကဗျာအမျိုးအစား လေးချိုး၊ ရတု၊ တေးထပ် ဆိုတာတွေလဲ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်မသွားသေးပါဘူး။ ကျေးလက်အလှူအတန်းတွေ၊ ဇာတ်အငြိမ့်ပွဲတွေနဲ့ မင်းခမ်း မင်းနားတွေမှာ တွေ့နေရပေမဲ့ အားမကောင်းလှတာရယ်၊ ဒီခေတ်ဖွံ့ဖြိုးလာစရာအကြောင်းမရှိတာရယ်ကြောင့် အမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်း မရည်ရွယ်ဘဲ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။)
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မြန်မာကဗျာရဲ့ လက္ခဏာကို မော်ဒန်လက္ခဏာလို့ အကဲဖြတ်သူတွေက အကဲဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီ မှာလဲ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်း မော်ဒန်ကဗျာတွေဟာ အရောရော အထွေးထွေး ဖြစ်နေပါတယ်။ မူလအယူဝါဒကို အစွန့်ဘဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မော်ဒန်အလံအောက် ခိုဝင်လာတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ခေတ်စမ်းမော် ဒန်တို့၊ တော်လှန်မော်ဒန်တို့ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ မော်ဒန်မှ မော်ဒန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အစ်ဇင်အမျိုးမျိုး၊ အယူ အဆအမျိုးအမျိုး၊ ထင်ရာမြင်ရာ ကွဲပြားနေတာ တွေ့ရတယ်။ အဓိကကတော့ မော်ဒန်သဘောတရားရေးရာ အားနည်းတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ပါပဲ။
ဒိနေ့ခေတ် လူငယ်မော်ဒန်ကဗျာဆရာတွေရဲ့ အလုပ်(တာဝန်)ဟာ ကြန်အင်လက္ခဏာ၊ ကဗျာဂုဏ်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မော်ဒန်သဘောတရားရေးကို ပေါင်းစပ်ပေးရေးပဲလို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျား။ ဆက်လက် လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ညိမ်းညို at 13:304comments Links to this post
ဒါပေမဲ့ သေချာတာ၂ခု ရှိတယ်
သူက ရီစရာမောစရာ ကျီစားလိုက်တာပါတဲ့
Posted by ညိမ်းညို at 03:437comments Links to this post
ဟော… ဟိုမှာ လာနေပြီ
မလုပ်နဲ့ ! မလုပ်နဲ့ !
အား ကောင်း မောင်း သန် ။
Posted by ညိမ်းညို at 23:20 13 comments Links to this post